Layma's World: November 2008
ကိုဟန်သစ်ငြိမ် ဒီတစ်ခါရေးခိုင်းတာ တကယ်ခေါင်းစားသွားတယ်…။ လေးမ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းတဲ့ အချက် သိပ်မရှိပါဘူး…။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမလိုအားမရဖြစ်ရတာတွေ အများကြီးရှိနေပေမယ့် မုန်းတယ်လို့ပြောရမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားနာတယ်…။ သိပ်တော် သိပ်ကောင်းနေလို့ တော့မဟုတ်ပါဘူး…။ ဟာ.. ဟ… လေးမ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းတဲ့အချက် ၁၀ ချက်ပြည့်အောင် မနည်း စဉ်းစားရတယ်… သူများကို မုန်းတဲ့ အချက်တွေချည်းပဲ တန်းစီထွက်လာတယ်… သေရော.. ခက်ဘူးလား…။
လေးမရဲ့ မုန်းစရာ ၁၀ ချက်ကို ရှုစားကြပါရှင်..။ သူများတွေဘက်ကကြည့်ရင် လေးမမှာ မုန်းစရာအချက်တွေ ဒီထက်မက ရှိနေမှာပါ…။ လေးမကိုယ် လေးမ ပြန်ကြည့်တော့ ဒီလောက်ပဲ မြင်ပါတယ်…။
***** ၁။ အပျင်းထူခြင်း ( လေးမ ပျင်းလို့ ရရင် ရသလောက် ပျင်းပါတယ်ရှင်… တစ်နေ့ သေမှာပဲမို့ရည်မှန်းချက်တွေလည်း သိပ်ကြီးကြီးမထားပါဘူး… အဲဒီ အကျင့် မုန်းစရာကောင်းပါတယ်… အကျင့်ဆိုးပါ.. )
*** ၂။ စကားမပြောလိုခြင်း ( ပြောဖို့ လိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်း ပြောတတ်ပေမယ့် … အလှူ..မွေးနေ့ .. ဧည့်ခံပွဲတွေမှာ လေးမ အမြဲ စိတ်အိုက်ရပါတယ်… အဲလိုနေရာတွေမှာ အာလပသလာပလို့ ခေါ်မလားမသိဘူး… အဲဒါတွေပြောပြီး ရယ်မော ခေါင်းငြိမ့်တဲ့ အရည်အချင်းမှာ အညံ့ဆုံးပါ..)
** ၃။ ထမင်းမစားလိုခြင်း ( လေးမ မြန်မာမ ဖြစ်ပေမယ့် ထမင်းမကြိုက်ပါဘူးရှင်… ၀တ်ကျေတန်းကျေ ထမင်းစားနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြင်ကတ်ပါတယ်… မုန့်ပဲသရေစာ နှစ်ခြိုက်ပါတယ်.. )
** ၄။ အစပ်မစားနိုင်ခြင်း ( အပူုအစပ်စားရင် အဆီကျတယ်.. ပိန်တယ်လို့သိရပြီးကတည်းက အစပ်မစားနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းမိတာပါပဲရှင် )
*****၅။ စိတ်ပျော့ခြင်း ( အရာတော်တော်များများကို ပြေပြေလည်လည်တွေး အရှုံးပေးတတ်တာ စိတ်ပျက်မိပါတယ်)
* ၆။ ခါးခါးသီးသီး နာကျည်းတတ်ခြင်း ( လေးမ မုန်းမိတဲ့ သူတိုင်း နာမည်ပျက်သွားကြတာ… တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ၅ ယောက်လောက်ကြုံပြီးတဲ့အခါ ခါးခါးသီးသီး နာကျည်းတတ်တာ အကုသိုလ်တစ်ခု ပြုမိသလိုများဖြစ်နေသလားလို့…။ အခုတော့ ဒီအကျင့်ကို ဖျောက်ပြီး မမုန်းမိအောင် .. ပြေလည်အောင်.. တွေးတတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်…)
*** ရ။ အားကစား ၀ါသနာမပါခြင်း ( ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်… သူများလုပ်တာလည်း မကြည့်တော့… လေးမ… ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ဘူး.. ဒီအကျင့်လည်း မုန်းစရာပဲ )
* ၈။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် မကြာခဏ သွားလိုခြင်း ( ဆံပင်ကိုတော့ အမျိုးမျိုးလုပ်ချင်နေတာပဲ… ညှပ်လိုက်.. ကောက်လိုက်…ဖြောင့်လိုက်… ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ရင် ဆံပင်ပေါင်းတင်တယ်… ဖယောင်းသွင်းတယ်… ဆံပင်ဆိုင်မရောက်တဲ့ လ … ဆိုတာမရှိဘူး… အဲဒီအကျင့်က ပက်ကျံ ကုန်သပေါ့ရှင်.. )
*** ၉။ အ၀တ်အစား မရွေးချယ်တတ်ခြင်း ( လေးမနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အ၀တ်အစား ဒီအသက်အရွယ်ရောက်နေတာတောင်… ဗိသုကာတစ်ယောက် ဖြစ်နေတာတောင်… မရွေးချယ်တတ်လို့စိတ်ပျက်ရပါတယ်… ဘယ်သူဝယ်ပေး.. ရွေးပေးသလဲဆိုတော့… အမေ ၂ ယောက်နဲ့ကိုကောင်းကင် ပါ…)
**** ၁၀။ တစ်ယောက်ထဲ နေလို ချိန် များခြင်း ( တစ်ယောက်ထဲ သက်မဲ့တစ်ခုခုနဲ့ ( ကွန်ပြူတာ.. စာအုပ်..) နေရတာ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်… အဲဒီအတွက် သူက မငြိုငြင်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငြိုငြင်မိပါတယ်…)
ခင်မင်စွာနဲ့လေးမကို ရေးခိုင်းတဲ့ ကိုဟန်သစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။ ဘာလို့ တင်သလဲဆိုတော့ သူများတွေ ရေးထားတာဖတ်ဖြစ်တိုင်း “ ငါဆိုရင် ဒီလို ရေးမိမှာ..” “ ငါရော ဘယ်လို စဉ်းစားမှာပါလ်ိမ့်..” “ ကျွန်မကတော့ ဒီလိုထင်တယ်.. ရှင်…” ဆိုတဲ့ အတွေးလေးက အမြဲကပ်ပါလာနေကျ ဖြစ်နေလို့ .. အဲဒီအတွေးတွေ ရေးချခွင့်ရအောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ သူကို ကျေးဇူးတင်တာပါ…။ သူများတွေ ရေးနေတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်ကို ဘယ်သူမှ မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ၀င်ရေးရမှာ ရှက်စရာကောင်းတဲ့အတွက် ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူရှိတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်…။
လေးမ ရေးတဲ့ စာကို ခင်မင်စွာ လာရောက် ဖတ်ရှုသွားကြသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်…။ ။
ဖြည့်စွက်ချက် ။ ။ * လေးတွေက comment မှာ လေးမနဲ့တူတဲ့ အချက်တွေ ပြောပြသွားတဲ့ လူတွေကို ကိုယ်စားပြုတာပါ…။ အားရှိစရာကြီး လေးမ ရဲ့ မုန်းစရာကောင်းတဲ့ အရည်အချင်းတွေက လေးမ တစ်ယောက်ထဲမှာပဲ ရှိနေတာမဟုတ်ပါလား…ဟေး..ဟေး…။
Posted by lay-ma at 7:41 PM 17 comments Links to this post
Labels: Analysis, personal, Tag
Posted by lay-ma at 2:17 AM 22 comments Links to this post
Labels: personal, Seasonal Post
မင်းမျက်ရှတဲ့ အမတ်တွေ …
သူတို့ ကို ပုံပမာထား
ကမ်းနားသစ်ပင် … တဲ့။
ကမ်းနားမှာပေါက်လို့… တဲ့ …။
သူ့ ဆန်စား …. ရဲ
သူ့ ထံပါး …. မြဲ ခဲ့ပေမယ့်
ယိုးလို့ဖြို
ငြိုးလို့ပြိုစေ… သတဲ့ …။
တုံ့ ယူဖို့မကြံစည်ဝံ့ပါဘူး
နေခြည်ဖြာမှ နွေးသောကြောင့် …။ ။
Posted by lay-ma at 5:36 AM 12 comments Links to this post
သူမနဲ့ကျွန်တော် ဒီနှစ်တွေမှာ နေ့ တိုင်းလိုလို တွေ့ ဖြစ်ကြတယ်… ။
သူမ အရမ်းနေမကောင်းဖြစ်နေချိန်… ခရီးဝေး ထွက်ချိန်ကလွဲရင် ကျွန်တော်တို့၂၄ နာရီမှာ အနည်းဆုံး တစ်နာရီလောက်တော့ ဆုံဖြစ်ကြတယ်…။
သူမက ကျွန်တော့်အပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးသလို ကျွန်တော်ကလည်း သူမကို အမြဲတွေ့ ချင်နေမိတယ်…။
တော်တော်ဆိုးတဲ့ မိန်းကလေးဗျ… ။
ပညာရပ်က လွဲရင် ကျန်တာတွေ တော်တော် လုပ်ချင်တဲ့ မိန်းကလေး…။
ကျွန်တော်က သူ့ ကို ဒီအခြေအနေထက်ပိုတော်တဲ့ ပိုထက်တဲ့ မိန်းကလေး ဖြစ်စေချင်တာ… ။ စာလုပ်ရအောင်ပါလို့ပြောတာလည်း မလုပ်ပြန်ဘူး…။ သူလုပ်ချင်တာ ပေးမလုပ်ရင် ကျွန်တော့်နား မကပ်တော့ဘူးတဲ့… မခေါ်တော့ဘူးတဲ့ ဗျာ …။
နောက်ဆုံးတော့လည်း သူမ သဘောကို လိုက်လျောရတာပါပဲ… ကျွန်တော်က သူမ စိတ်ချမ်းသာနေတာကိုပဲ မြင်ချင်တဲ့သူကိုး…။
ကျွန်တော့်မှာ သူမ အတွက် ဂိမ်းမျိုးစုံကို စုဆောင်းပေးထားရတယ်… ။
သူမကြိုက်တဲ့ ဂိမ်းတွေ ဆော့ပေးနေရင် ကျွန်တော့်နားကကို မခွာတော့ဘူး…။
အပျင်းကလည်း ထူသဗျာ… မှတ်ဥာဏ်က မကောင်းရတဲ့ထဲ အပျင်းက လည်း ကြီးသေးတော့ ကျွန်တော့်မှာ သူမ ကိစ္စတော်တော်များများကို အလွတ်ကျက်ထားပေးရတယ်…။ သူမက မေးလိုက်လို့ကျွန်တော်က ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ရင်လည်း စိတ်တိုသေးတာ….။ ကြောက်ရ၏…။
သူမ သိချင်တာတွေကလည်း အများသား.. ။ ကျွန်တော် မသိတဲ့အရာတွေအတွက် သိတဲ့ သူတွေဆီ ခေါ်သွားပေးရသေး… ။ ခေါ်သွားတာ ကြာရင်လည်း သူမက ဆူဆောင့်ချင်ပြန်ရော …။ သူမ သူငယ်ချင်းတွေဆီ သွားချင်ရင်လည်း လိုက်ပို့ ရတယ် …။
သူမက စကားနည်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုတော့ သူမရဲ့ အတွေးတွေ … ခံယူချက်တွေ .. ခံစားချက်တွေ ပြောပြတတ်တယ်…။
ကျွန်တော်ကတော့ သူမရဲ့ ပြုံးလိုက်.. မဲ့လိုက်… ရယ်လိုက်.. မောလိုက်… လွမ်းလိုက်… ဆွေးလိုက်… စကားလုံးတွေ အတွက် နားထောင်သူ သက်သက်ပါပဲ …။
သူမက ကျွန်တော့်ကို တခါတလေ အော်ငေါက် ရိုက်ပုတ်တတ်သေးတယ်…။
ကျွန်တော်လား… .. ဘာမှ ပြန်မလုပ်ပါဘူး… ငြိမ်ခံနေလိုက်တာပဲ .. ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ကိုး… ကျွန်တော်က ဂဂျီဂဂျောင် အူတိအူကြောင် လုပ်နေတော့ သူမက စိတ်မရှည်ဘူးပေါ့…။
ဟင့်အင်း… မမုန်းပါဘူး.. ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဘယ်တော့မှ မုန်းသွားကြမှာမဟုတ်ဘူး..။
သူမက ကျွန်တော့် အပေါ် သံယောဇဉ်အတော်ကြီးတာ… ကျွန်တော့်ကို ယုံကြည်ချက်တွေ တပွေ့ တပိုက်ကြီးနဲ့တရင်းတနှီး ဆက်ဆံနေရှာတာ… ။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် ငိုချင်တယ်… ကျွန်တော့်ကို အလုံးစုံ မယုံပါနဲ့လို့ကျွန်တော် အော်ပြောလိုက်ချင်တယ်…။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ … သူမနှစ်သက်တဲ့ သီချင်းခွေတွေကို ရင်မှာပိုက်ပြီး သူမခေါ်လိုက်တိုင်း အသင့်ဖြစ်နေဖို့ ပဲ ကျွန်တော် ကြိုးစားပါတယ်…။
အော်.. ဘာတော်လဲ… ဟုတ်လား… တော်စပ်ပုံလား…
သူငယ်ချင်းပါ … သူမက ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း… ကျွန်တော်က သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းပါ … ။
အော်.. ကျွန်တော်လား… ဘယ်သူလဲ… ဟုတ်လား…
ကွန်ပြူတာ … လေ... ။ ။
Posted by lay-ma at 7:03 PM 15 comments Links to this post